डेंगु जसको आजसम्म भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन, जोखिम उच्च, भेटिए ८ सय ५४ डेंगु रोगी
पर्याप्त बजेट नछुट्याइँदा भएन रोग नियन्त्रण
| 2017-10-26 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | मौसम परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय डेंगु रोगको संक्रमण उच्च देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आठ सय १४ जनामा डेंगुको लक्षण देखापरेको छ ।
जसमध्ये अधिकांश पुरुष रहेका छन् । अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्षमा ३५ जिल्लामा आठ सय ५४ जनामा डेंगु देखापरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले निर्माण सञ्चारलाई जानकारी दिए ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा संक्रमण देखापरेको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा डेंगु रोग निवारणका लागि ६० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जोखिमको प्रकृति हेरेर कम जोखिम भएका जिल्लामा दुई लाख र उच्च जोखिम भएका जिल्लामा १० लाख रुपैंयासम्म बजेट बिनियोजन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले बजेट छुट्याए पनि बजेट न्यून मात्रामा विनियोजन गरिँदा र जोखिम आउन नदिने कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ ।
सर्लाही, धादिङ, चितवन, रुपन्देही, नवलपरासी, धनुषा लगायतका तराईका जिल्लामा डेंगु रोगको संक्रमण देखापरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जोखिम नियन्त्रण निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलले बताए ।
जोखिम नियन्त्रणका लागि के गरेको छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका जोखिम नियन्त्रण निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलले भने, ‘डेंगु रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत अघि बढाएका छौं ।’ उनका अनुसार यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम नियन्त्रणका लागि ३५ जिल्लामा बजेट समेत छुट्टयाएको छ ।
जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले डेंगु सार्ने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ ।
डेंगु ज्वरो रोगको प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत बजार क्षेत्रमा पानी राख्ने भाँडा, ट्यांकी, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र पानीमा लामखुट्टेको बसाई रहे नरहेको हेरी नष्ट गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गिरीको भनाइ छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय २९ जनामा डेंगु भेटिएको थियो भने दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।
यो वर्ष भने यो रोगले अहिलेसम्म मानिस नमेरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो, जुन रोग ‘एडिस एप्टिई’ जातको संक्रामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ । यो संक्रामक सरुवा रोग हो ।
यो रोग सार्ने लामखुट्टे सहरउन्मुख क्षेत्रमा बढी पाइने भएकोले सहरी रोग पनि भन्ने गरिन्छ ।
यस जातको लामखुट्टेले स–साना सफा पानी जमेका स्थानमा अन्डा पार्ने गर्दछ ।
खास गरी वर्षाको पानी जम्ने टिनका डब्बाहरु, रंगका खाली डब्बाहरु, थोत्रा टायरहरु, मट्टितेलका खाली ड्रमहरु, फूलदान, गमला, कुलर, पानीका टयांकी आदिमा यसले फुल पार्दछ ।
यस लामखुट्टेले धेरैजसो दिउसो मात्र टोक्ने बताइएको छ ।
कसरी देखा पर्छ डेंगु ?
एक्कासि उच्च ज्वरो आउनु, धेरै टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी तथा पछिल्लो भाग दख्नु, ढाड जोर्नी तथा मांसपेशीहरु दख्नु, शरीरमा बिमिरा आउने, रक्तश्राव हुने, एक्कासि उच्च ज्वरो आउने लक्षण देखापरेको खण्डमा डेंगु ज्वरो भएको शंका गर्न सकिने शुक्रराज ट्रपिकल टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
डेंगु विरुद्घ हालसम्म कुनै भ्याक्सिन आएको छैन । २००६ मा भारतबाट आएका एक जनामा डेंगु रोग भेटिएको थियो । सन् २००६ मा काठमाडौंमा पहिलो डेंगु रोगी फेला परेका थिए ।
डेंगुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै उत्तम उपाय रहेको बताइएको छ ।
डेंगुबाट बच्न घरवरपर सफा राख्नुपर्ने, लार्भा नष्ट गर्नका लागि पानी जम्न नदिने, पानी जम्ने भाँडा, सिसी, टायर, फूलदानी, ड्रममा जथाभावी पानी जम्न दिन नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
बिहीबार, ९ कात्तिक ०७४